Prof. Geedi oo lagu amaray in ka qeyb qaato cadaadiska lagu hayo Muqdisho lagana indho tiray mucaaradka Bosasso iyo Hargeysa.
Buluugleey, May 22, 2006
Prof. Geedi ayaa u hanjebey dagaaloogayaasha Muqdisho, kuwaas oo u abaabulan qaab koox dambiyeed ah, kuwaas oo hadda qaab calooshooda u shaqeystanimo ugu adeegaya dalal shisheeye iyo sirdoonka Mareykanka, Yuuhuda iyo Itoobiya oo isku wada xiran.
Prof. Geedi oo ka turjumaya siyaasada ku dhisan qabyaalada ee uu ku shaqeeyo ninka madaxda u ah oo ah Col. C\_llahi ayaa edeyn u soo jeediyey qabqablayaasha Muqdisho dagaalka ka wada, isaga oo kaga aargoosanaya diidmada ay uga soo cirdeeyeen dhulka degaankooda.
Eedeyntaas ayaa lagu fasiray mid ka turjumeysa carada uu Col. C\_llahi ka qaaday markii sirdoonka Mareykanka ay nimankaas siiiyeen lacag badan oo ay ku howl geliyeen dagaalka ay kula jiraan culumada Soomaaliyeed.
Dowlada Mareykanka ayaa dhinac martay Col. C\_llahi oo ay u arkaan dagaalooge soo daadiyey dhiiga dadkiisa, danahii laga lahaana ay Itoobiya horay uga dhameysatay, sidaasna lagu geliyey howlgabnimo.
Mareykanka ayaa sidaas oo kale hadda ugu arka qabqablayaasha Muqdisho iney yihiin dhiigyacabyo aan lahyn garasho dadnimo laakiin dantiisu ay maanta iyaga awoodooda ku xiran tahay.
Dowlada Col. C\_llahi waxaa Mucaarad ku ah qowleysatada ka arrimisa gobolka Bari, gobolada waqooyi, Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Jowhar iyo shacab weynaha Soomaaliyeed oo aan wax kalsooniya siin. Waxa ay cid walba isweydiineysa sababta farta loogu fiiqayo mucaaradka Muqdisho, indhahana looga qarsanayo inta kale.
Prof. Geedi ayaa loo arkaa mid cadaadiskiisa ay lug weyn ku leedahay Itoobiya oo ay ka soo horjeedan dhamaan hogaamiye kooxeedyada Muqdisho. Dowlada Itoobiya ayaa fursad ka dhiganeysa dagaalka ka jira Muqdisho si ay u tirtirto magaalo madaxtinimada Muqdisho iyo sharafka siyaasiyiinteeda si aysan u helin garawsho iyo dhaqaale uga yimaada dhanka caalamka.
Wuxuu Col. C\_llahi is tusay in haddii xilka laga qaado qabqablayaasha Muqdisho iney dhuminayaan awooda dowladnimo oo ay kula xiriirayaan dibeda ayna halis u geli karaan in lagu soo rogo cuno qabateyn la saaro hantidooda iyo safarkooda. Sidoo kale wuxuu aaminsan yahay haddii ay dhacaan nimankan in dadweynaha Muqdisho ay ku adkaaneyso inta ay soo dhisanayaan hogaamiye kooxeedyo iska cabin kara inu xoog ku muquuniyo.
Waxaan qarsooneyn in dowlada Itoobiya ay ku cadaadineyso Bari iyo Waqooyi iney gooni uga istaagaan jamhuuriyada Soomaalida. Dowlada Itoobiya waxey hadda wadaa dadaal qarsoon oo ay dooneyso heshiis qarsoodiya oo ah in waqooyiga Soomaaliya ay ku darsanto Itoobiya. Sidoo kale Gobolka Bari wuxuu si dowladnimo madaxbanaan uu heshiis ula galay shirkado shisheeye oo qodaya macdan ama ka kaluumeysanaya xeebaha Soomaaliyeed oo dhan.
Dadka qaar ayaa qaba in Col. C\_llahi ay ka go’an tahay inuu dhinaca Dhaqaalaha kala dagaalamo dadweynaha Muqdisho, taas oo uu ka xun yahay dhaqaalaha ka yimid Mareykanka ee soo galay Muqdisho. Waxaa dhawaan la xaqiijiyey in Col. C\_llahi uu amaray in lacag been abuura la soo daabaco, taas oo loogu tala galay in suuq weynaha Muqdisho ganacsigiisa lagu dumiyo.
Col. C\_llahi ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaqa xoogan ee ka socda suuqa Bakaaraha iyo in dowlada ugu awooda badan ee ka jirta Muqdisho ay gacanta ugu jirto nimanka ganacsatadaa, kuwaas oo aan sinaba u dooneyn madaxtinimada Col. C\_llahi.
Eedeynta lagu daan daansanayo qabqablayaasha dagaalka Muqdisho ayaa u muuqata mid uu Col. C\_llahi uga faa’ideysanayo dagaalkii siyaasadeed ee uu ku hayey dadweynaha Muqdisho ee uu kala dagaalamayey dhinaca nabada iyo dhaqaale uga yimaada caalamka.
Dowlada Col. C\_llahi ayey ummadda Soomaaliyeed ka rajo dhigtay kadib markii ay ka gaabisay iney xoojiso nidaamka dib u heshiisiinta, si toosana ay uga amar qaadato dowlada Itoobiya. Qabyaalada iyo musuqmaasuqa ayaa noqday labada cadow ee uu cuskaday Col. C\_llahi.
Dagaalka uu ku hayo Muqdisho ayaa xambaarsan caadifad qabiil. Isaga oo aan awoodin inuu Bari iyo Waqooyi ka socodsiiyo dowladiisa, ayuu haddana iska dhaadhiciyey inuu dagaal siyaasadeed la galo Muqdisho kadib markii uu ku guuldareystay inuu xoog ku muquuniyo mucaaradnimada ay kala soo horjeedaan dadweynaha Muqdisho oo ay horboodayaan dagaaloogayaalka isaga madaweynenimada u soo caleemo saartay.
Dowlada Col. C\_llahi ayaa ah mid gebi ahaanba u baahan iney garato in gabalkeeddi dhacay, ayna u baahan tahay jiritaankeeda magac ahaan inuu meesha ka baxo hadiiba ay ku guuldareysatay iney socodsiiso howlihii loo xilsaaray. Dowlada oo dhan gebi ahaan waa in la rido, dadka Soomaaliyeedna mar keliya loo daayo xalkeeda iney raadsato, dagaaloogayaasha oo dhana ay banaanka ka istaagaan hadiiba la doonayo in dowlad caafimaad qabta ay Soomaaliya yeelato.
Waxa ay in badan isweydiinayaan waxa ay dejinayaan xubnaha baarlamaanka ku shiraya Baydhabo iyo cidda talo ka yeeleysa oo ay u maqan yihiin, maxaayeelay dowladii ay sharciga u dejinayeenba lama hayo oo waa waxaan jirin. Mar haddii aysan jirin dowlad si barlamaan ku jiraa waa qalad ku dhisan hanaan aan dheeli tirneyn. Sidaas daradeed meesha mataalo go'aan ay ka gaaraan keenista ciidamo shisheeye iyo la xisaabtamida dowlada.